မီးဖိုဆောင်အသုံးအနှုန်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ဥပမာ...ကျွန်တော်တို. တွေက..ကန်စွန်းရွက်ကြော်ဆိုရင်...pan_fried watercress လို.သုံးလိုက်ပေမယ့်
တစ်ချို.စာအုပ်တွေမှာ..Sautee' လို.သုံးတတ်ပါသေးတယ်...Sautee' ကပြင်သစ်စကားလုံးဖြစ်ပြီး..ပာင်းချက်နည်းမှာ..အင်္ဂလိပ်ကမွေးစားလိုက်တာကြောင့်...အထက်ပါအဓိပ္ပာယ်ပဲဆိုတာ...Hotel Life ၀င်ဖူးသူတိုင်း...အားလုံးသိကြပါတယ်...။ထို.အတူပဲ ကြက်ဥခေါက်တာကို...whisk လို.သုံးပြီးအချို.စာအုပ်တွေမှာ scramable လို.သုံးတတ်ကြပါသေးတယ်...။ဒါကအကျဉ်းပါ....။
(၁) grate = ( ခြစ်သည် ။ ဥပမာ ချိစ်တုံးကိုခြစ်သည်၊ အုန်းသီးခြစ်သည်)
(၂) grill = ကင်သည်။
(၃)Layer = အလွှာဖြစ်အောင်လုပ်သည်၊ အထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်သည်
(၄) level =စစ်ချသည် (ဥပမာ အမှုန်.တွေကိုဇကာနဲ.စစ်ချ)
(၅) melt = ပျော်ဝင်အောင်အပူပေးသည်( ဥပမာ ထောပတ်ကိုပျော်အောင်ဖျော်)
(၆) pinch = ဖြူးသည် ( ဥပမာ ဆားဖြူးသည် sprinkle လို.လဲသုံးပါတယ်)
(၇)pour = လောင်းထည့်သည်။
(၈) scramble = ခေါက်သည်၊ မွှေသည်။( whisk လို.လဲသုံးပါတယ်)
(၉) serve = တည်ခင်းဧည့်ခံသည်( မြန်မာလို.တော့..ခူးပေး..ခပ်ပေးသည်)
(၁၀) simmer = အငွေ.ဖြင့်ပေါင်းသည်။
(၁၁) slice = အချပ်လေးများဖြစ်အောင်ပါးပါးလှီးသည်။
(၁၂) spread = ပျံ.နှံ.အောင်သုတ်သည်၊ လိမ်းသည်။
(၁၃) stir = မွှေသည်။
(၁၄) taste = အရသာ မြည်းစမ်းသည်။ (ဗပာုသုတအနေနဲ.ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်..။)
Q -- Yamoe Phyu Phyu microwave oven က ကျွန်မတို့အိမ်မှာဟင်းနွေးရုံကလွဲပြီးအပိုပစ္စည်းလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ovenနဲ့ချက်လို့ရနိုင်မယ့် ဟင်းနည်းလေးတွေသိချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါနော်။
A -- ပာင်းချက်နည်းများ Microwave တွေကအဓိကအားဖြင့်(၂) မျိုးလာပါတယ်
Timer ပါတာနဲ. Auto cook ပါ..။Timer ကတော့ကိုယ်လိုအပ်သလိုချိန်ညှိယူရပြီး..
auto cook ကတော့..ကြက်ဥကြော် ၊ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် ၊ ကော်ဖီဖျော်တာတွေအသုံးပြုလို.ရပါတယ်..။
Timer တွေအတွက်guide book မှာညွှန်းဆိုချက်တွေပါပါတယ်..။
Microwave ပာာအရေးပေါ်သုံးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး..ပာင်းနွှေးဖို. (သို.) ခဲနေသာအသားများဖျော်ဖို.အဓိကအသုံးပြုကြပါတယ် .Yamoe Phyu Phyu
ပာင်းချက်နည်းများ FB မှကူးယူပါသည်။